Cashar barasho: Isku dar weji tufaax ah (i) | Abuurista khadka tooska ah
Tabobar: Wejiga ku dar tufaax (i)
Casharkaan waxaan ku arki doonaa qaab aad u fudud sida loo qoondeeyo tufaax iyadoo la tixgelinayo dhinacyada lagama maarmaanka u ah abuuritaanka a isdhexgalka macquul ah oo xirfadle ah. Tan awgeeda waxaan u isticmaali doonnaa dukumiintiyo kala duwan: Sawirka tufaaxayaga, sawirada sifooyinka fudud ee kala duwan, sawir leh caleen taajkii dabeecada ku duugtay iyo dhanka kale waxaan isticmaali doonaa sawir dixiriga ah.
Qalabka ugu muhiimsan ee lagu fulin karo curinta qaabkani waa: LQalabka xulashada, qaababka isku qasida, heerarka, gooladaha, masaxa iyo farta Haddii loo baahdo. Waan bilownay!
Marka hore waxaan soo dhoofsan doonnaa sawirka aasaasiga ah ee aan ku shaqeyn doonno, kiiskan tufaaxayaga, in kastoo si cad aad u adeegsan karto curiyaha aad rabto inaad shakhsi ka dhigato, qaabku aad buu isugu egyahay.
Markaa waxaan soo dhoofsan doonnaa isha aan ku shaqeyn doonno. Waxaan hubin doonaa inay leedahay qaraar weyn. Si aan u mariyo indhaha, afka iyo sanka waxaan isticmaali doonaa sawirro kala duwan.
Waxaan aadi doonnaa aaladda xulashada ee aaladda qalabka oo aan dooran doonno midka nagu habboon. Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonnaa aaladda xulashada laba-geesoodka. Markaan xulano xadka indhaheenna (oo ay ku jiraan khadadka muujinta), waxaan aadi doonnaa meenuga Xulashada> Rogrog oo waxaan ku riixeynaa furaha Delete si aan u tirtirno aagga aan ina daneyneyn.
Hadda waxaan ka shaqeyn doonnaa waxyaabaha ugu muhiimsan iyo farqiga u dhexeeya isha. Waxaan tagi doonnaa liiska Sawir> Isku hagaajin> Qalooca.
Waxaan raadin doonnaa ikhtiyaarka ugu habboon, waxaan dooneynaa inaan muujinno aagagga is-barbardhiga si aan awood ugu yeelano inaan sawirkeenna si fudud ugu dhex-galno dhismaha. Xaaladdan oo kale waxaan siinnay xoogaa qiyam ah 180 ka baxsan iyo 175 gudaha, inkasta oo tani ay kuxirantahay mashruucaaga.
Waxaan tagi doonnaa liiska Sawir> Isku hagaajin> Heerarka. Waxaan raadin doonaa xalka ugu fiican si loo muujiyo meelaha ugu iftiinka iyo mugdiga badan, laakiin taxaddar weyn ayaan ka muujineynaa inaanan gubin sawirka. Xaaladdan oo kale waxaan wax ka beddelnay qiimaha soo-galinta ee 7 / 1,15 / 226.
Iyada oo qalabka Transform (ee menu Tafatir> Beddel ama la Ctrl + T) waxaan wax ka badali doonnaa cabirka iyo qaabeynta isheena ilaa aan ka qancno.
Marka aan intaas sameyno, waxaan aadi doonnaa qalab tirtir (E) oo waxaan dooran doonaa burush aad u baahsan, waxaan sidoo kale wax ka badali doonaa cabirka si aan ugu shaqeyn karno qiyaasta ugu haboon. Waxa aan sameyn doonno ayaa ah inaan ka gudubno xadka ishaas si aan u jilcino oo aan uga dhigno inay u dhexgalaan qaab habsami leh dusha tufaaxa.
Marka xigta, liiska lakabyada (oo isha la xushay) waxaan wax ka beddeli doonnaa habka isku-darka adoo dooranaya Habka iftiinka.
Marka tan la sameeyo, waxaan adeegsan doonnaa qalab tirtir oo ka fog masaafo gaaban ayaan kaamil ka dhigi doonaa goynta.
Maaddaama aan damacsannahay inaan ilaashanno midabada gudaha godka isha iyada oo aan saameyn ku yeelanaynin aagga dibadda, waxa aan samayn doonno ayaa ah in aan nuqul ka sameysno lakabkeenna isha si aan uga shaqeyno kuna dhexgalno asalka.
Waxaan ku dabaqi doonnaa qaab isku dhafan lakabkan gudaha Normal.
Waxaan aadi doonnaa aaladda xulashada (xaaladdan oo kale aaladda xulashada) Wareegga magnetic) oo xulo qaybta la doonayo.
Waxaan ku sifayn doonnaa xulashada lasso polygonal haddii loo baahdo in lagu daro aag la xushay ama laga jaro (si loo daro waxaan gujin doonnaa shift isla waqtigaas aan xulano oo aan yareyno ayaan gujin doonnaa Alt isla markaa waxaan doorannaa).
Kadib dhagsii liiska Xulitaanka> Invert oo waan tirtiri doonaa aagga dibedda ee aynaan danaynayn badhanka tirtirka.
Waxaan dhameystiri doonaa isdhexgalkaan udhaxeeya labada lakab ee isha la shaqeynaya eraser ee lakabka kore a cabir 300 iyo a 20% daah furnaan.
Waxaan kala dooran doonnaa labada lakab waxaana ku dhejin doonnaa lakabyada badhanka abuur koox cusub.
Koox ayaa naloo abuuri doonaa oo waxaan kaliya ku jiidaneynaa labadeena lakab galka kooxda cusub isla markiibana waa lagu dari doonaa gudaheeda.
Kadib waan nuqulaynaa kooxda inay yeelato isha midig.
Markaan dooranay labada lakab ee kooxdaas cusub, waxaan aadi doonnaa liiska Tafatir> Ubadal> Flip Horizontal.
Badhanka jiidaya waxaan ku dhejin doonnaa aagga ugu habboon.
Si aad uga dhigno wax badan oo dabiici ah, waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa hooska iyo muujinta meelaha. Sida aad ku arki karto dhinaca midig ee baloogga waxaa ku yaal aag madow, hoos hadh leh. Si loo waafajiyo loona dhexgalo dusha isha midig, waxaan aadi doonnaa aaladda Hoos kadhig iyo leh 50% opacity cabirkiisu yahay 350 burush iyo burush aad u baahsan Waxaan bilaabi doonnaa inaan dib u eegno aaggaas.
Natiijadu waa inay noqotaa wax sidan oo kale ah. Maskaxda ku hay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee keena isku-kalsoonida noocan ah ay yihiin nalalka, lambarka sirta, iyo midabbo u dhigma waxyaabaha u dhexeeya
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tabobar: Wejiga ku dar tufaax (i)
Tabobar: Wejiga ku dar tufaax (ii)
Xirmo + 50 horudhac paradisiacal HD